बाल विवाह नारामा सिमित ! बाल बिबाह गरेको आरो पमा बेहुला र उनका बुवा पक्रा उ -
बाल विवाह नारामा सिमित ! बाल बिबाह गरेको आरो पमा बेहुला र उनका बुवा पक्रा उ
१५ फागुन, वीरगञ्ज । वीरगञ्जबाट प्रहरीले बालविवाह गर्ने गराउने कार्यमा संलग्न भएको आ,रोपमा दुईजनालाई पक्रा,उ गरेको छ । वीरगञ्ज महानगरपालिका(१६ नगवा बस्ने ४६ वर्षीय बुवा र उनका १९ वर्षीय छोरा पक्रा,उ परेका हुन् । माघ १९ गते १९ वर्षी युवकको विवाह वीरगञ्ज(१६ लक्ष्मीनारायण टोल बस्ने १७ वर्षीया युवतीसँग भएको थियो । उनीहरुविरु,द्ध बालविवाह मुद्दामा पर्सा जिल्ला अदालतबाट ७ दिनको म्याद थप गरी अनुस,न्धानअघि बढाइएको प्रहरीले जनाएको छ ।
बाल विवाह गरेको सूचना आएपछि प्रहरीले बेहुला र बेहुलाको बुवालाई फागुन १४ गते प,क्राउ गरेर बाल विवाह सम्बन्धी कसूरमा मुद्दा चलाएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका प्रहरी नायब उपरीक्षक ओम प्रकाश खनालले जानकारी दिए । ‘बाल विवाह गरेको उजुरी दिने हद म्याद तीन महिनाको हुन्छ, १७ वर्षको केटीसँग बाल विवाह गरेको जानकारी आएपछि उनीहरुलाई प,क्राउ गरेर कार,बाही प्रक्रिया अघि बढाएका हौं,’ उनले भने,‘ तराई(मधेसको समाजमा बाल विवाह अत्या,धिक हुने गरेको भए पनि उजुरी नआउँदा कार,बाहीमा समस्या हुँदो रहेछ । उनले भने जानकारीमात्रै दिए पनि हामी का,रबाही गर्छौ ।’
बालविवाहको घट,ना हुन लागेको वा भएको थाहा भएमा तत्कालै नजिकको प्रहरी कार्यालय वा जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सामा सूचना उपलब्ध गराउन पनि प्रहरीले अ,नुरोध गरेको छ ।मुलुकी अप,राध संहिता २०७४ मा वि,वाह गर्ने व्यक्तिको उमेर २० वर्ष नपुगी कसैले विवाह गर्न वा गराउन नपाउने उल्लेख छ । त्यसरी गरिएको विवाह स्वतः बदर हुन्छ । यो कसुर प्रमाणित भए तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिमाना हुन्छ ।
Previous मामाले गरे आफ्नै भान्जालाई नाटकीय शैलीमा अप,हरण ! घर मालिक नै शंकाको घेरामा
Next ह,त्या भएको आश,ङ्का ! कैलालीमा युवक भेटीए मृ,त